Ivelan'ny trano Round Table Cooking Fitaovana Top mitono hena Grill - China Shijiazhuang HGW Trading
Fitaovana ivelan'ny trano Cooking Round Table Top mitono hena Grill
Round ambony latabatra saribao mitono hena Grill antoko Patio Portable Round Stand, Black, 14 santimetatra
Ny Round Tabletop Arina mitono hena mahandro sakafo tianao indrindra ao amin'ny sehatra kely. Ny manodidina kettle Grill manolotra 151 santimetatra toradroa Chrome nopetahany takela Grid mahandro sakafo. Tsy ampy ny lehibe mahandro 8 hamburgers na akoho tratrany indray mandeha. Ny ivelany dia manana karazana verinia vita bakoly, vy taratasy ambony sy ny ambany, Bakelite famohana sy ny Grid tariby ambany ho an'ny nanampy ny filaminana. Ny naneho indray mitete-in lavenona catcher dia mora removable ho an'ny fanadiovana, izay mahatonga izany tonga lafatra "on-ny-mandeha" Grill. Lehibe ny hitondra miaraka aminao ny Mitsangantsangana, filasiana, tailgating, amoron-dranomasina, dobo antoko, cookouts fitsingerenan'ny andro nahaterahana, BBQ.
153 sq.in coking faritra
Sarony & Fire boaty bakoly karazana verinia farany
1 hafanana-mahatohitra kitay hanendasanao Lite famohana
Chrome nopetahany takela nahandro makarakara, fantsona tongony & ambany fitahirizana talantalana
Tafavory vokatra Dimensions: 43D * 52H
Mitady idealy Round Arina Grill Manufacturer & mpamatsy? Isika manana fantina lehibe amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny Round Mijoroa Grills mitono hena no azo antoka tsara. Origin China izahay Factory ny Tabletop Grill BBQ. Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay. Product Categories: Outdoor Product> BBQ Grill
Previous: Fire lavaka sy mitono hena BBQ Grill Natambatra Outdoor Party
Next: Tamin'ny taona fankatoavan'ny Gas BBQ amin'ny Side burner Grill